'ဂျင်းကောင်'ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးမှာ ရိုးရိုးအေးအေး ကာရိုက်တာအနေနဲ့ မြင်တွေ့ ရဦးမယ့် အေးဝ?? - Yangon Media Group
‘ဂျင်းကောင်’ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးမှာ ရိုးရိုးအေးအေး ကာရိုက်တာအနေနဲ့ မြင်တွေ့ ရဦးမယ့် အေးဝ??
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၁
‘ ဂျင်းကောင်’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ရိုးရိုးအေးအေး ကာရိုက်တာအနေနဲ့မြင်တွေ့ရဖို့ရှိပါ တယ်လို့ သရုပ်ဆောင် အေးဝတ်ရည်သောင်းက ပြောပါတယ်။ ”ဂျင်းကောင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာပါဝင်ရတဲ့ ကာရိုက်တာကတော့ အခုအပြင်က မအေးသောင်း ပုံစံလေးပါပဲ။ ရိုးရိုးအေးအေးပုံစံလေး၊ ဘုရားမှာ သူနဲ့တွေ့တယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ရုံတင်ရင် သိရမှာပေါ့နော်”လို့ ပြောပါတယ်။
‘ဗိုလ်အောင်ဒင်ချစ်သောမိန်းမများ’ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကြီးမှာပါဝင်တဲ့ ဂျင်းကောင်ကာရိုက်တာမှာ ပရိသတ်များ အကြိုက်တွေ့ခဲ့ပြီး အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ယခုအခါမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအဖြစ် ထပ်မံပုံဖော်ရိုက် ကူးခြင်းဖြစ်ပြီး အဲဒီဇာတ်ကားကြီးမှာ သရုပ်ဆောင် အေးဝတ်ရည်သောင်းလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာ ဖြစ် ပါတယ်။ ”အရင်က ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဂျင်းကောင်ကလည်း ဗီဒီယိုဇာတ်ကားဆိုပေမယ့် အရမ်းကိုပေါက်ထားခဲ့တဲ့ ဇာတ် ကားတစ်ကားပေါ့နော်။ အဲဒီဇာတ်ကားကို အခုလိုမျိုး ဆက်ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ပြန်လည်ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်က ပေါက်စီကို သတိတရနဲ့ လာကမ်းလှမ်းတဲ့အတွက် ကျေးဇူးလည်းတင်ရပါတယ်။ ပထမဇာတ် ကားကတည်းက ပရိသတ်ကသိထားတဲ့ ဇာတ်ကားဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ တာဝန်ကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကောင်း ဆုံးဖြစ်အောင်လို့တော့ ပေါက်စီကြိုးစားထားပါတယ်”လို့ သရုပ်ဆောင် အေးဝတ်ရည်သောင်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရိုက်ကူးမှသာ ဒါရိုက်တာကိုပေါက်နဲ့ ပထမဦးဆုံးလက်တွဲရိုက်ကူးခွင့်ရခြင်းဖြစ်သလို ကာရိုက်တာအရ ပါဝင်ရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းနည်းပေမယ့်လည်း ဇာတ်လမ်းကို သဘောကျလို့ လက်ခံရိုက်ကူးဖြစ်တာပါလို့ လည်း သူမကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ”ဒါရိုက်တာ ကိုပေါက်နဲ့က အခုမှ ပထမဦးဆုံးလက်တွဲပြီးတော့ ရိုက်ကူးဖြစ်တာပါ။ ဟိုးအရင်ကတည်းကလည်း တစ်ခါမှမဆုံဖူးခဲ့ဘူး။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဂျင်းကောင်ဇာတ်လမ်းလည်းဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ပေါက်ပြီးသား ဇာတ်လမ်းလေးမှာ ပါဝင်ရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပါဝင်ရတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းက နည်းပေမယ့်လည်း ကျေနပ်ပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်အေးဝတ်ရည်သောင်းဟာဆိုရင် လက်ရှိအချိန်မှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကို လက်ခံရိုက်ကူး နေပြီး ‘မင်္ဂလာရှိတဲ့ အရပ်’ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်း ပရိသတ်အားပေးမှုများစွာ ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာအားဖြင့် တီထွင်ဆန်းသစ် ထိုးဖောက်နိုင်သောဆု ဒါရိုက်တာခရစ်(စ)တီးနားခီ ရရှိ
ဒီဂျေ အကျော်အမော် အဗီချီ အသက် ၂၈ နှစ်၌ ကွယ်လွန်
ကစားကွင်းတစ်ခုတွင် ဓါးရှည်များဖြင့် ခြိမ်းခြောက်၍ ငွေနှင့် ဖုန်း ယူဆောင်သွားသူများအား နာရ
ရွှေတိဂုံအပါအဝင် ဘုရားများသို့ The Walk for Yangon လမ်းလျှောက်ပွဲ လူအင်အား ၃ဝဝ ခန့် ပါဝင်ဆင်နွှဲ
လွှတ်တော်ကို ဒရုန်းဖြင့် ရိုက်ကူးရန် ပြင်ဆင်ခဲ့သည့် တူရကီသတင်းဌာနမှ သတင်းထောက်နှစ်ဦး၏ အမ??
၂ဝဝ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့ရန် အဆိုကို တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ မတ??